Soo dejisan Startpack Launcher 1.0.9 – Vessoft
Soo dejisan Startpack Launcher
Startpack Launcher – software ah u helaan si degdeg ah u websites kala duwan iyo kaydinta daruur. Startpack Launcher u saamaxaaya in ay hesho iyo ku daro links of sites kasta ama adeegyada la awooda in uu iska badalo magaca. Software waxey oggaatay taranka ee xiriir la soo xulay oo isticmaalaya module ama default browser gaar ah. Sidoo kale Startpack Launcher kuu ogolaanayaa inaad biin link a on taskbar in siisaa inay helaan si dhaqso ah goobaha aad jeceshahay. Startpack Launcher u saamaxaaya in ay isticmaalaan links bookmarked ka kombiyuutarada kala duwan la .Wadashaqayntaas ee xisaabta.
Quick in ay helaan wax kasta oo sites
Cutub Gaarka ah ee taranka of sites
Keenshaliga of sites in taskbar ka
Itusi liiska links
.Wadashaqayntaas Iyo Shaam
Startpack Launcher Software la xiriira:
English, فارسی, Русский, Tiếng Việt... Realtek High Definition Audio Drivers 2.79
العربية, English, Українська, Français... Mixcraft 7.7
English, Українська, Français, Español... MySQL 5.7.16